Allgedo.com » 2012 » October » 30
Home » Archive Daily October 30th, 2012
Ciidamada dowlada oo qof rayid ah ku dilay xaduuda Kenya
Ciidamada dowlada Soomaaliya ee kusugan xaduuda udhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku toogtay qof rayid ah oo kamid ahaa dadka deegaanka gudaha kenya. Rag katirsan ciidamada dowlada ayaa ku amray ninkan inuu istaago hase ahaatee waxaa la sheegay inuu ka biyo diiday kadibna ay toogteen. Markaas ayay ciidamada dowlada ka tageen goobta, waxaana gaaray ciidamo katirsan dowlada Kenya oo meydka meesha ka...
Nabadoon Axmed Diiriye oo ka digay in 9 Wasiir laga dhigo Xukumada Dr Saacid
Xili dhawaan lagu wado in Ra’isul Wasaaraha dowlada Soomaaliya uu soo magacaabo Xukumadiisa ayaa hadana waxaa jira warar sheegaya in xubnaha golaha wasiirada laga dhigayo 9 xubnood oo kaliya. Isagoo lahadlayay saxaafada ayaa Nabadoon Axmed Diiriye Cali ahna Afayeenka Odayaasha Beelaha Hawiye waxaa uu ugu baaqay Dowlada cusub ee Soomaaliya in ay ka feejignaato qorshaha lagu yareynayo xukumada. Nabadoon...
Xaflad lagu soo dhaweynayay Ra’isal wasaaraha Soomaaliya oo magaalada Phoneix ee gobolka Arizona lagu qabtay (sawiro)
Phoenix, Az (AOL) – Sabtidii aan soo dhaafnay oo ay taariikhdu aheyd October 27 ayaa waxaa magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka lagu qabtay xaflad aad u qurux badan oo lagu soo dhaweynayay magacaabistii Ra’isal wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid). Xafladaan oo ay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Arizona si wada jir ah usoo qaban-qaabiyeen ayaa...